Dr. Tint Swe's Writings: Hepatitis B tests ဘီပိုး စမ်းသပ်နည်းများ
2. Hepatitis B surface antibody (anti-HBs) ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ (ပရိုတင်း) ကို ခုခံတဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ကို စမ်းတာ။ နလံထလာရင် သွေးထဲမှာ ဒါတွေများလာမယ်။ အရင်က ပိုးဝင်ဘူးတာကိုသိရမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူလဲ တွေ့ရမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့ လို-မလိုသိစေမယ်။
3. Anti-hepatitis B core (anti-HBc), IgM = ခုခံတဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ကို စမ်းတာ။ ပိုးဝင်ခံထားရတဲ့ အသည်း (ဆဲလ်) တွေမှာတွေ့ရမယ်။ သွေးထဲမှာ မတွေ့နိုင်ဘူး။ ရက်တိုရော နာတာရှည်ပိုးဝင်တာကိုစမ်းတယ်။ တခါရှိရင် တသက်တာ ရှိနေမယ်။
• လိင်ဆက်ဆံဘက် အားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်။
Hepatitis B virus (HBV) အသည်းရောင် ဘီပိုး ကူးစက်ခံနေရာသူပေါင်း သန်း ၃ဝဝ ရှိနိုင်တယ်။ အာရှနဲ့ အာဖရိကမှာ ပိုများတယ်။ ပိုးရှိတဲ့ မိခင်ကနေ မွေးလာတဲ့ကလေးကို ကူးကြတာ ပိုများတယ်။ အသည်းကင်ဆာလဲ အဖြစ်များတဲ့ နေရာတွေဖြစ်တယ်။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ကူးကြတာပိုများတယ်။ လူငယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တာ များတယ်။
အသည်းရောင် ဘီ ပိုးရောဂါ အချူပ်
၁။Subclinical ဘာလက္ခဏာမှ မရှိတာ။
၂။ Clinical acute hepatitis လတ်တလော အသည်းရောင်တာ နဲ့
၃။ Chronic hepatitis နာတာရှည်အသည်းရောင်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်နဲ့ဖြစ်ရင် ဒါမျိုးပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
- သူကနေ အသည်း နဲနဲသာပျက်စီးတာ၊
- Cirrhosis အသည်းခြောက်တာနဲ့
- Hepatocellular carcinoma အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
- ၁ နှစ်တကြိမ် AST, ALT, Alkaline phosphatase နဲ့ Liver function (Bilirubin, Albumin, Prothrombin time) တွေ လုပ်မယ်။ Gastroenterologist/Hepatologist အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ မပြတ်ဆေးစစ်နေရမယ်။ အသည်း အခြေအနေကို စစ်မယ်။
- ၆ လ တကြိမ် Alpha-Fetoprotein (AFP) လုပ်မယ်။ Hepatocellular carcinoma ရှိ-မရှိသိရမယ်။
- ၆ လ တကြိမ် အသည်းကို Ultrasound လုပ်မယ်။ အသည်းကင်ဆာကို သေးသေးလေးကတည်းက သိရမယ်။
- ၁ နှစ်တခါ HBsAg လုပ်မယ်။ ရောဂါသယ်ပို့သူဟုတ်-မဟုတ်သိမယ်။ ၁% ထက်နဲသူတွေက HBsAg ရှင်းသွားမယ်။ anti-HBs ပေါ်လာမယ်။
- ၁ နှစ်တခါ HBeAg စစ်တာကို HBsAg positive ဖြစ်နေသူတွေကို လုပ်မယ်။ HBeAg positive (+) ဒါမှမဟုတ် AST>200 ရှိသူတွေ Liver biopsy (ဘိုင်အော့ပ်စီ) လုပ်မယ်။ Anti-viral treatment ဆေးကုမယ်။ အသည်းပိုပျက်စီးလာသူ၊ အသည်းကင်ဆာ သံသယရှိသူတွေလဲ ပါတယ်။
- ရောဂါ သယ်ဆောင်နေသူ၊ သူ့ဇနီး-ခင်ပွန်း၊ မိသားစုဝင်တွေကို Hepatitis B စစ်ရမယ်။ လိုသူတွေ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရမယ်။ သူတို့ရော Hepatitis B carrier ပိုးသယ်ဆောင်သူမှန်သမျှကိုပါ Hepatitis B ပညာပေးရမယ်။